जापानमा वर्किङ भिसामा हुनुहुन्छ भने ! तपाईले पढ्नै पर्ने जानकारी... - Nayapul Online
जापानमा वर्किङ भिसामा हुनुहुन्छ भने ! तपाईले पढ्नै पर्ने जानकारी…
काठमाण्डौँ – पछिल्ला केही वर्षहरुमा जापानमा विदेशी कामदारको सङ्ख्यामा वृद्घि भइरहेको छ । त्यो संख्या नेपालीहरुको हकमा पनि बढेको छ । जापानमा आउने धेरै नेपालीहरुमध्ये कामदारको स्टाटसमा जापानमा बसोबास गर्नेहरुको संख्या धेरै छ । यदि तपाईले गर्दै गरेको जागिर स्थायी हो भने यो जानकारी तपाईका लागि होइन । अस्थायी वा सिमीत समयावधिका लागि तोकिएको जागिर गर्दै हुनुहुन्छ र कुनै बेला तपाइ वेरोजगार हुनु भयो भने तपाइको भिसाको स्तर के हन्छ भन्ने कुराको जानकारी आज यहाँ दिन लागिएको छ ।
वाग्मती सफाइ महाअभियानको ३ सयौँ हप्ता पुरा